Apple Card waxaa lagu eedeeyay inuu yahay jinsi, baaritaan ayaa furan - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM Kaarka Apple ayaa lagu eedeeyay inuu yahay jinsi, baaritaan ayaa la furay
Kaarka Apple, galmada? Tan waxaa ku dhawaaqay David Heinemeier Hansson, oo ah ganacsade Mareykan ah. Hadaladiisa, ku samee Twitterwaxay horseed u noqotay furitaanka baaritaan New York.
"Kaarka Apple runtii waa barnaamij fuushan galmada ah"waxay tilmaamaysaa qandaraaslaha. Aniga iyo xaaskeyga waxaan si wada jir ah u cadeyneynaa canshuuraheena waxaana is qabnay muddo aad u dheer. Oo weliba wali algorithm-ka Apple ee algorithm-ka wuxuu u maleynayaa inaan xaq u leeyahay xaddiga deynta 20 jeer ka sarreeya kan uu yahay "ayuu raaciyay. Wuxuu sii wadaa inuu sharraxo inuu la xiriiray adeegga macaamiisha Apple ka dib kiiska oo VAS aysan sharrax ka bixin karin sababta ay wax u kaladuwan yihiin. Shaqaaluhu waxay u sheegaan oo keliya in algorithmku wax walba maamulo isla markaana uu hubiyo inaysan takoorin.
Bogagga kumbuyuutarka, oo kumanaan jeer dib loo baahiyay kumanaan jeer, xitaa waxay qabteen isha Steve Wozniak. Aasaasaha shirkadda Apple ayaa sheegay inuu soo maray xaalad la mid ah, oo leh amaah xaddidan 10 jeer ka sarreeya isaga marka la barbar dhigo kan xaaskiisa.
Waxaas oo kale ayaa nagu dhacay. Waxaan helay 10x xadka amaahda. Ma lihin bangi kale ama koonto kaarka amaahda ama hanti kale oo gaar ah. Way adag tahay in aadanaha u hesho sixitaan in kastoo. Waa tikniyoolajiyad weyn 2019.
- Steve Wozniak (@stevewoz) November 10 2019
Kiiskan kadib, waaxda Adeegyada Maaliyadeed ee New York furay baaritaan. "Waaxdu waxay baari doontaa haddii sharciga New York lagu xadgudbay waxayna hubin doontaa in dhammaan macaamiisha loola dhaqmo si isku mid ah, iyadoon loo eegayn jinsiga"ayuu ku yiri qoraal uu soo saaray. “Algorithm kasta oo ula kac ama si ula kac ah u takooro dumarka ama nooc kasta oo ilaaliya oo dadka ah wuxuu ku xadgudbayaa sharciga New York”ayaa qoraalka lagu daray.
Dhinaceeda, Goldman Sachs, bangiga uu Apple la wadaago Apple Card, ayaa iska difaaceysa maadada. "Go'aannadeena amaahda waxay ku saleysan yihiin sumcadda macaamiisha ee kuma saabsana jinsiga, sinjiga, da'da, hanuuninta galmada ama arrimo kale oo sharciga ka mamnuuca". Apple faahfaahin kama bixin.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://iphoneaddict.fr/post/news-275935-lapple-card-accusee-detre-sexiste-enquete-ouverte
Tijaabada JBL Link Bar: codka codka loogu talagalay TV-yada ma ahan kuwa caqli badan